छोराको जितमा ‘आमालाई बाँच्ने साहस’ – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७७ श्रावण ३० गते शुक्रबार १२:०४ मा प्रकाशित
उमेरले भर्खर दुईबीस टेकिन्, नानीदिदी ! आजभोली उनी निकै मख्ख छिन् । खुशी छिन् र दिल खोलेर टोलमा निस्किन्छिन् । सदा गाली र अपहेलानाको शब्द सुन्नुपर्ने उनले आजभोली टोलबासीको नमस्कारको प्रसाद बटुल्छिन् । त्यसैले उनी मख्ख छिन् । अहिले नानीदिदीलाई पोखरा महानगरपालिका १० औद्योगिक क्षेत्रका छिमेकीहरुले चिया खान मात्रै निम्तो दिदैँनन् बाटोमा उनको छाँया देखेपछि छेउछाउको कुर्सी तान्दै आउनुस बस्नुस न भन्न सम्म भ्याउछन् । कुनैबेला सय रुपैया सापटी नदिनेहरु नै जग्गा पास गर्नुछ भन्दै लाखौ ऋणको माग गर्दै उनको पाउँ पर्छन । त्यसैले त नानीदिदी मख्ख छिन् ।
को हुन् नानीदिदी ?
हरेक सन्तानका लागि आमा अपार छिन् । आफ्ना तिनै सन्तानले आमालाई पुकार्ने प्रिय नाम हो नानीदिदी । १६ वर्षको उमेरमा नानीदिदी (पार्वती थापामगर) ले खैरेनीटारका रामु सुबेदीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएर नयां अध्याय सुरु गरिन् । बुटवलकी नानीदिदीको वैवाहिक जिवनको यात्रा पोखरामा सुरु भयो । विवाह भएको १ वर्षमै जेठो छोराको रुपमा शिव सुवेदीको जन्म भयो त्यसको दुईवर्ष पछि माहिला छोरा सुजन जन्मिए । र केही समय पछि कान्छो छोराको रुपमा समुन्द्र जन्मिए । उनका पति रामु केही वर्षपछि वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश हानिए । यता नानीदिदीले मजदुरी गर्दै सन्तानलाई हुर्काइन् । अहिले उनका तिनै छोराहरु नौजवान छन् । नेपाली फुटबल टोलीबाट यू–१९ खेलेका उनका जेठा सुपुत्र शिव अहिले भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । कबड्डी टिम गण्डकी प्रदेशको कप्तान समेत रहेका माहिला छोरा सुजन तत्कालै सम्पन्न हिमालय रोडिज सिजन–३ को उपाधि जिते र कान्छो छोरा कक्षा १० मा अध्ययनरत छन् । छोराहरुको सफलता र खुशीका कारण नयां जिवन पाएकी नानीदिदीलाई बाँच्न थप साहास जुटेको छ ।
सुजनको जीतमा नानीदिदीलाई बाँच्ने साहास
नानीदिदीका माहिला छोरा हुन् सुजन सुवेदी । टोलमा स–साना नानीबाबुहरुलाई व्यायाम गर्न सिकाउने उनलाई अरुले चिन्दैनथे । तर उनी अहिले धेरै युवाका आईडल बनेका छन् । बाँसमाथी चढेर अडिसन दिन पुगेका सुजनले यामाहा एफ.जेड मोटरसाईकल चढेर पोखरा फर्किए । यामाहाले प्रस्तुत गरेको हिमालय रोडिज सिजन –३ को उपाधि उनले सयौं हजारौ युवाहरुलाई पाखा लगाउदै आफ्नो नाममा दर्ता गराए । र नामको अगाडि रोडि थप्न सफल भए । ग्राण्ड फिनालेसम्म पुग्दा उनले युवाहरुकोवाहवाही बटुलिसकेका थिए । कारण उनले पुरा गर्ने टास्क र अडिसन राउण्डको उनको बिरामी बुवा–आमाको कारुणीक कथा थियो । र उनले रोजिड जित्न अङ्ग्रेजीमा दख्खल राख्नुपर्छ भन्ने भ्रमलाई चिरीदिए ।
सुजनले रोडिजमा जानुअघि बिरामी आमा र बुवाको अहोरात्र सेवा गरेका थिए । जुन प्रसंग पोखरा अडिसन राउण्डमा उतारेका थिए । सो कारुणीक कथा र उनको डेमोन्सट्रेसन पश्चात पाँच वटै बजर कब्जामा लिन सफल रहेका थिए । रोडिज प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उनले अन्तत: उपाधि जिते । ‘बाबु जितेर आईज भनेर पठाएको थिए, आखिर जितेरै आयो । म त साह्रै खुशी छु’, नानीदिदीले भनिन्, ‘(ठुलो चाँही छोरालाई देखाउँदै) शिव चाँही बाहिर थियो हामीलाई बिरामी हुदा हेरचाह यसैले गरेको हो । अहिले यसले जितेपछि अझै बाँच्ने साहास जुटेको छ ।’
छोराले जितेपछि टोलमा आफ्नो मुहार नै परिवर्तन भएको नानीदिदी बताउछिन् । ‘पहिला मकै खन्न आईज भन्थे, मलाई अर्कै तरिकाले हेर्थे अहिले त चिया खान आउ भन्दै कुर्चि तान्छन्’, उनले भनिन्, ‘आजभोली त अझै नमस्ते पनि गर्छन ।’
आफूहरु बिरामी हुदा सापट नपाएका सुवेदी परिवारलाई पछिल्लो समय ऋण समेत माग्न आउने गरेको बताउदै भन्छिन्, ‘जग्गा पास गर्नुपर्याे पैसा हालिदिनुस् न भन्छन, सबै कारोबार छोराहरुले गर्छ, त्यही भएर बाबुहरुलाई फकाउनुस् न भन्छन्, बिरामी हुदा सापटी नदिनेलाई कसरी ऋण दिनु र खै ?’
बाँदरको प्रेरणाले दिलायो रोडिजको उपाधि
हिमालय रोडिज सिजन –३ को उपाधि जितेर सुजन घर फर्किए र खोजी गरे बाँदरको तर उनको नजरमा बाँदर परेन । जस्को प्रेरणाबाट उनी शाहसिक क्रियाकलापमा तानिएका थिए । र रोडिजको उपाधि जितेको थिए । रोडिजको यात्रामा जानुअघि उनको घरमा बाँदर थियो । तर फर्किदा बाँदर नदेखेपछि नरमाईलो लागेको सुजन बताउछन् । ‘राम्रैसँग बाँदर पालेका थियौ । म पहिल्यैबाट बाँदरसँग खेल्थे, म शाहसिक क्षेत्रमा लाग्नु पनि त्यसको देन थियो, उनले भने, ‘छरछिमेकमा सताएपछि नानीदिदीले नै पठाउनुभएको रहेछ ।’
यता, उनका दाई शिव सुवेदीले सुरुमा भाईको उपाधि प्रति विश्वास नभएको बताउछन् । ‘बाँदर हाम्रो परिवारको सदस्य जस्तै थियो, भाई पनि फिजिकल्ली फिट थियो तर पढाईमा कमजोर भएकाले रोडिजमा सबै ईङ्लिस बोलेको देखेपछि जित्दैन जस्तो लाग्थ्यो तर जित्यो फेयर हुनेरहेछ खुशी छौ ।’ उनले भने ।
तस्विर : prem svn